चिसो मौसममा किन बढ्छ प्रदूषण ? | सुदुरपश्चिम खबर
चिसो मौसममा किन बढ्छ प्रदूषण ?
यी ग्यास श्वासनली हुँदै भित्र छिर्छन् । ती हानिकारक पदार्थहरू विभिन्न अंग हुँदै रगतसम्म पुग्छन् र रगतका भित्ताहरूलाई कडा बनाइदिन्छन् । जसले हामीमा रक्तचाप बढाउँछ । सुदर्शन अर्यालले अनलाइनखबरमा लेखेका छन्।